Mpanjarija tsara indrindra amin'ny haben'ny toekarena amin'ny habakabaka tsara indrindra | Rayson
Rayson ao amin'ny Faritra Industrial Rayson, Lalana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Vokatra lehibe tsara indrindra azo antoka sy ny toekarena King Size Hotel Mattress Supplier.
Fametran-javamaniry King's Economie haben'ny toekarena dia mitaky mafy ny fiainan'ny olona na ny asan'ny olona. Nampiasana be ho an'ny trano fonenana, varotra ary indostrialy izany.
Rayson dia novolavolaina tamin'ny teknolojia mandroso. Izy io dia novolavolaina tamin'ny CAD, nohodinin'ny teknolojia CNC, ary fehezin'ny teknolojia sensor. Ny trano habe amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fitsidihana
1.Mahay ve ianao orinasa na orinasa?
Matetika izahay dia manao asa manokana amin'ny famokarana kasety, lamba vita amin'ny lamba ary ny loharano mihoatra ny 10 taona.
2. Azonao atao ve ny manampy ahy hanao ny famolavolana anay manokana na hampiasa ny sary famantarana ahy amin'ny vokatra?
Azontsika atao ny manao ny kidoro arakaraka ny volavolanao na manome ny serivisy OEM mila anao hanome anay ny sarinao na sary sary.
3.Inona ny fomba fandoavanao ekena?
LC eo imason'i / amin'ny TT, 30% Deposi ary mizana 70% dia manohitra ny tahadikan'ny antontan-taratasy fandefasana ny fanoratana 7 andro fiasana.
Zavatra lehibe mila ilazako hoe:
1.Misy hafa kely ihany amin'ny tena tianao. Raha ny tena izy, azo atao ny namboarina amina modely sasany toy ny modely, firafitra, ny haavony ary ny habeny.
2.Misy aza misavoritaka momba izay mety matanjaka fividianana lohataona avo indrindra. Eny, noho ny traikefa 10 taona, homenay torohevitra vitsivitsy ianao.
3.Ny sanda lehibe dia ny manampy anao mamorona tombony bebe kokoa.
4. Faly izahay mizara ny fahalalana aminay aminao, miresaka fotsiny aminay.
Rayson Global Co., Ltd dia orinasa fiaraha-miasa Sino-US, naorina tamin'ny 2007 izay hita ao amin'ny Tanànan'i Shishan, Foshan High-Tech Zone, ary mipetraka eo akaikin'ny orinasa malaza toa an'i Volkswagen, Honda Auto ary Chimei Innolux.Izatra ny orinasa. fiara tokony ho 40 minitra avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Guangzhou Baiyun sy efitrano fampirantiana kanto ao Canton.
Matihanina vita amin'ny Rolling Up Bonnell Spring Mattress mpanamboatra